Free Sell : paikady vaovao be hampifandraisana ny tanora mitady asa sy ny orinasa madinika – Blaogin'i Voniary
Tsy zovina amintsika intsony ny fahasarotan’ny fitadiavana asa eto Madagasikara noho ny fitotongan’ny toekarena ka mahatonga ny tanora maro an’isa hidonanam-poana na hirotsaka amina asa tsy sitrany akory. Eo koa anefa ireo orinasa sahirana mivarotra ny vokany noho ny tsy fananan’ny mpiasa traikefa sy ny tsy fahafehezana ireo teknikan’ny varotra ka mikaroka fatratra ireo olona izay tena mahomby amin’izany . Ireo sokajy roa ireo : ny tanora mitady asa sy ny orinasa te-hamarotra ny entana vokariny no hampihaonin’i Fara Rabeson amin’ny fomba miavaka ao anatin’ilay vohikala Free Sell.
Tolotra ho an’ny tanora sy ny vehivavy Malagasy indrindra indrindra
« Misy fotoana ianao ilay mitondra vohoka iny, efa hita ny kibo saingy mbola afaka miasa tsara nefa tsy raisin’ny olona satria bevohoka, na koa ianao vao teraka ka fantatrin’ny mpampiasa dia tsy raisiny satria mbola kely loatra ny zanakao ! efa nandalovako daholo izany ka izay no mahatonga ahy manolotra vahaolana ! » Hoy i Fara Rabeson tompon’ny Orinasa Free Sell. Orinasa vao natsangany izy io mba hampihaonana ao anaty vohikala iray, izany hoe any amin’ny aterineto, ny orinasa madinika sy ny mpahay varotra na « Commercial ».
Ho an’ny tanora sy ny vehivavy Malagasy indrindra indrindra
Tsy mitaky mari-pahaizana manokana ny fidirana ao fa misy fiofanana mikasika ny varotra sy ny fivelarana maha-olona tsy maintsy atrehina kosa. Mba hisivanana ireo izay tena vonona sy ireo te-hitsapatsapa fotsiny dia nasiana sarany 25000 Ar io fiofanana io. Rehefa mahavita io dingana io ilay olona dia raisina ho mpiasa ao amin’ny Free Sell ary mahazo fiofanana mitohy hanatsarana hatrany ny asany. « Ny tanora izay mbola tsy manana ireny traikefa takian’ny orinasa ireny, ireo izay te-hanao asa an-tselika no sady mianatra, ireny ihany koa no tena tadiavinay ! » Hoy i Fara Rabeson. Izany hoe ireo tena sahirana mikaroka asa etsy sy eroa izany dia azo antoka fa hahita izay tandrify azy ao amin’ity rafitra hatsangan’i Fara Rabeson ity.
Fifampitsinjovana sy fifanohanana
Fepetra roa no takiana amin’ireo tanora te-hiditra amin’ny tambazotra Free Sell : ny fananana fotoana malalaka, na iray andro tontolo na tapaka andro na ora vitsivitsy ary ny fanatrehana ny fiofanana voalaza tetsy ambony. Avy eo, misoratra anarana ao amin’ilay vohikala ilay olona. Marihina fa tsy manan-kery ny fandefasana anarana ao amin’ny Facebook fa ny ao amin’ny vohikala ihany. Noho izany, entanina hanaraka ny lamina sy hahafoy fotoana kely ireo izay liana.
Raha mikasika ny orinasa miara-miasa amin’ny Free Sell indray dia ireo orinasa madinika sy salantsalany na « PME » ary ireo orisana vao manomboka na « Startups ». « Nisy namako iray izay niezaka nikaroka fiaraha-miasa tamina orinasa lehibe malaza eto an-toerana dia izao no navalin’ny tompon’andraikitra tao : raha izahay izao dia tsy hiara-hihosina amin’ny orinasa kely toy ny anareo izao mihitsy ! » Nanohina an’i Fara izany sady nanaitra ny hambom-pony ka nahatonga azy nivoady hoe: « Aleo izany izahay samy madinika sy samy vao misondrotra no hifanohana ! ». Araka izany, ireo orinasa madinika miorina eto Madagasikara, mamokatra zavatra vita Malagasy no afaka mampivarotra ny entany amin’ny alalan’ity rafitra ity.
Fifanohanana sy fifampitsinjovana
Fantatrao ve ny Free Sell ?
Vehivavy Malagasy manam-pahaizana manokana amin’ny varotra sy manana traikefa amin’izany ary mpandraharaha no namorona ny Free Sell. Fara Rabeson no anarany ary tanjony ny fiaraha-miasa ao anatin’ny fifampitsinjovana sy ny fampivoarana ny maha-olona hatrany. Ankoatra ny fampifandraisana ireo olona mitady asa sy ireo orinasa mila mpahay varotra amin’ny alalan’ny vohikala dia manampy ny orinasa amin’ny resaka varotra ihany koa ny Free Sell amin’ny alalan’ny torohevitra ary fampiofanana ny mpiasa. Marihina fa amin’ny Sabotsy 23 Febroary izao amin’ny 08 maraina ka hatramin’ny 05 hariva, ny fiofanana voalohany izay karakarain’ny Free Sell miaraka amin’ny Creativeo. Asaina ianao hisoratra anarana dieny izao amin’ireo adiresy voalaza etsy ambany ireo.
Raha hifandray amin’ny Free Sell
Raha toa ianao ka liana na manana fanontaniana manokana momba ny Free Sell sy ny tambazotrany dia ireto ny adiresy afahanao mifandray amin’izy ireo :
Vohikala : www.freesellmada.com
Facebook : Free sell
Mailaka : contact@freesellmada.com
Finday : 034 09 443 58